Xiddigta Beytlaxam: waa maxay, astaamaha, taariikhda iyo asalka | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 02/08/2021 09:44 | Kala bixid
Marka loo eego dhaqanka Masiixiga, Xiddiga Belen Waa xiddigga ku hagaya Saaxiriinta meesha uu ku dhashay Ciise Masiix. Injiilka Matayos wuxuu xusayaa in Majuusiyiintu ay arkeen xiddiggii Beytlaxam ee ka soo muuqday Galbeedka, in kasta oo aysan sheegin inay tahay meera, xiddig, ama ifafaale kale oo xagga xiddigiska ah. Sida qoraalka ku qoran, ninka caqliga lihi wuxuu la safray xiddigta wuxuuna istaagay meeshii Ciise ku dhashay. Dhakhtarkii wuxuu la xiriiray boqorka Yuhuudda. Haddii ay ahaayeen cirbixiyeyaasha Giriigga ama Roomaanka, waxay ku xiri lahaayeen xiddigga xiddigta cirifka, meeraha boqorka, iyo Regulus, xiddiga boqorka. Haddii ay ka yimaadeen Baabuloon, waxay la xiriiri karaan Saturn (Kaiwanu). Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxay u badan tahay in Sirius ay u qoondeeyeen “saddexda boqor” ee suunka Orion.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa astaamaha xiddigta Beytlaxam iyo qaar ka mid ah taariikhdeeda.
1 Dahsoon xiddigta Beytlaxam
2 Taariikhda xiddigta Beytlaxam
4 Muxuu noqon karaa xiddiggu?
Dahsoon xiddigta Beytlaxam
Xiddigta Beytlaxam waa mid ka mid ah siraha ugu weyn ee la xiriira dhalashada Masiixa. Miyay tahay ikhtiraacidda Saint Matthew, xaqiiqo ka sarraysa ama aragti xiddigiska? Si aad u qeexdo, waa inaad ogaataa goorta Ciise dhashay iyo cidda ragga xigmadda leh ee reer Bariga ahi yihiin.
Marka laga hadlayo carruurnimadii Ciise, Waxaan kaliya wax ka barannaa Injiilka Saint Matthew iyo Saint Luke, xitaa labaduba way kala duwan yihiin. Dareenkan, San Mateo wuxuu leeyahay baaxad ballaaran. Dhab ahaantii, xaqiiqda ah inaadan si uun u garanayn waxa uu yahay Xiddigta Beytlaxam waxay si cad ula xiriirtaa taariikhda dhalashada Masiixa, laakiin tani waa su'aal weyn oo aan la xallin: goorma ayuu dhashay Ciise? Si aad u saxdo, ma aysan dhalan 2021 sano kahor. Taariikhdayadu waa khalad mana ku beegan dhalashadii Ciise. Haa, waxa ugu daran ayaa ah inuusan jirin aqoonyahan ku dhiiran inuu bixiyo taariikh cayiman oo hadda aan waxba la qaban karin.
Taariikhda xiddigta Beytlaxam
Markii Emperor Caesar Augustus uu amray tirakoobka, Injiilladu waxay sharraxayaan dhalashadii Ciise, oo dhacday intii u dhaxaysay 8 iyo 6 BC. C. «Dhammaan waxaa laga diiwaangelin doonaa magaaladii ay ka yimaadeen. Yuusuf oo ahaa reer Daa'uud ayaa ka tagay Naasared, magaalada Galili, wuxuuna aaday Beytlaxam, Yahuudiya, magaaladii Daa'uud, si uu ugu qoro xaaskiisa Maryan oo uur leh. Waxa kale oo ay u dhigantaa sannadihii ugu dambeeyay ee Boqor Herodos, oo dhintay 4 -tii BCE. C. Maalinta dayax madoobaadka. Laba qorrax madoobaad qayb ah ayaa la duubay 13 -kii Maarso iyo 5 -tii Sebtember
Herodos wuxuu dhakhtarkii ku yidhi: “Beytlaxam tag oo si fiican u ogow xaaladda ilmaha; markaad hesho, ii sheeg, aniguna waxaan rabaa inaan isaga caabudo ». Laakiin nimankii xigmadda lahaa ma ay soo noqon iyagoo og Herodos damaciisa, waxayna ku noqdeen jid kale. Nimankii xigmadda lahaa ayaa Herodo ku jeesjeesay oo aad u cadhooday. Wuxuu dadka ku amray inay afarta boqortooyo ku dilaan dhammaan carruurta ka yar laba sano. ”
Waqtigaas, Ciise wuxuu ahaan jiray 2 sano. Ogaanshaha taariikhda geerida Herodos iyo taariikhda uu dilay carruurta ka yar laba sano wax yar ka hor dhimashadiisa, Taariikhda dhalashada Ciise waa 7 ama 6 BC Sannadkii 2008, koox khubaro ah oo ka tirsan Jaamacadda Cibraaniga ee Yeruusaalem waxay heleen boqollaal mayd oo carruur ah qarnigii 0aad ee AD, oo da'doodu ahayd 2-XNUMX sano, intii lagu guda jiray hawsha qodista, taas oo ku beegnayd Xasuuqii Herodos.
Si kasta oo ay tahay xiddigta Beytlaxam, waa inay ahayd dhacdo sharaf leh oo soo jiidatay xiisaha Majaajilada, laakiin arrintu sidaas maaha muwaadiniinta kale. Saint Matthew wuxuu ahaa kan keliya ee sheegay Maguusyada, mana uusan siin cinwaanka boqorka, ama magaciisa gaarka ah, ama lambarkiisa. Magaca boqorka ayaa iyaga la siiyay qarnigii saddexaad. Qarnigii afraad, fiqiyayaashii Origen iyo Tertullian waxay ka hadleen saddexda nin ee caqliga leh, qarnigii siddeedaadna waxaa la magacaabay Melchior, Gaspar iyo Baltasar. Saaxiriintu waa rag caqli badan iyo saynisyahanno yaqaan cirka iyo dhacdooyinka samada ee mustaqbalka.
Waxay sharxeen nidaamka astaanta ee matalaya u dhowaanshaha meeraha meeraha kale ama soo gelidda iyo ka tagista kooxda xiddigaha. Iyaguna waa xiddigiyayaal. Majaajilada waxay ahaayeen wakiilka saddexda qaaradood ee la yaqaan xilligaas; Aasiya, Afrika iyo Yurub. Waxay yihiin wakiilo ka socda dunida oo dhan oo la yaqaan.
Muxuu noqon karaa xiddiggu?
Isku xidhka meeraha ayaa dhacay 7 BC. C., oo aan caadi ahayn. Meeraha Jupiter wuxuu ku dhowaad ka hor maray Saturn ilaa 3 jeer muddo gaaban gudaheed. Tani waxay ka dhacday kooxda Pisces. Saaxirkii wuxuu ku macneeyay xaqiiqadan inuu yahay: boqor weyn (Jupiter) ee caddaaladda (Saturn) wuxuu ku dhex dhashay Yuhuudda (Pisces). Astaanta kalluunka waxay la xiriirtaa astaantii hore ee Masiixiyadda, aqoonyahannada mawduuca qaarkoodna waxay tilmaamayaan inay ka soo jeedo jagada Jupiter iyo Saturn ee xiddigaha, waxayna xitaa la xiriirtaa dhalashada kalluumeysatada, Ciise .
Sida laga soo xigtay Nabiga, imaatinka Masiixa ayaa la filayay, calaamadahani waxay tilmaamayaan inay dhacayso, ugu yaraan kuwa Sixirka ka soo jeeda Bariga. Jupiter waa ilaaha ugu weyn Saturnna waa aabihiis. Waa maxay dhacdada weyn ee u baahan dhalashada Masiixa? Oo ma jirin isku -xidh meerayaasha oo keliya laakiin saddex jeer. Boqorrada, ilaahyada iyo kalluumeysatada, astaan ​​u dhiganta muuqaalka qof weyn, ugu yaraan kuwa sugayay Masiixa.
Waxaa laga yaabaa inay tahay supernova awood leh, oo ah xiddig tobannaan jeer ka weyn qorraxda oo qarxday, laakiin wax diiwaan ah lagama hayo oo samada lagama tegin. Wax cajiib ah ayaa dhacay Maarso 31 -keedii sannadka 5 BC. C. Xiddig cusub ayaa cirka ifisa. Novae waa xiddigo aad u dhalaalaya, oo aan u dhalaalayn sida supernovae, laakiin waa cajiib. Xiddigta cusub waxay ifisay 70 maalmood saaxiriintiina waxay u raaceen xagga bari. Goortay Yeruusaalem yimaadeen, oo Herodos baa arkay, xiddigtii baa iftiimisay xagga koonfureed, markii waagii beryay, waxayna kor u kacday Beytlaxam.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto xiddigta Beytlaxam iyo taariikhdeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Xiddigta Belen